पक्षपाती विकी: तथ्य वा मिथ्या? - Semalt ले यो कुराको विचारमा साझेदारी गर्दछ
जूलिया वाश्नेभा, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन् कि हार्वर्ड स्कूल अफ बिज़नेसका अनुसन्धानकर्ता र विद्वानहरूले हालसालै विकी र ज्ञानकोश ब्रिटानिका डाटाबेसहरू तुलना गर्ने उद्देश्यले एक अध्ययन अध्ययन गरेका छन्। अन्वेषकहरूले ,000००० भन्दा बढी अ -्ग्रेजीमा आधारित लेखहरू संयुक्त राज्यको राजनीति जस्ता बढी विवादास्पद विषयहरूमा केन्द्रित मूल्यांकन गरे।
फेen झु र उनका सह-लेखक शेन ग्रिन्स्टाइनले २०१२ मा राजनीतिक शुरुआतलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन red,००० भन्दा बढी लेखलाई "रातो" वा "निलो" को रूपमा वर्गीकृत गरे। एक साक्षात्कारमा शेनले विकिपेडियाको सफलताको बारेमा आभार व्यक्त गरे डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन बीचको राजनीतिक भिन्नता।
शेन ग्रिन्स्टीन र फे Z झू दुवैले राजनीति विज्ञानको निष्कर्षमा आकर्षित गर्न प्रत्येक पार्टीले प्रयोग गर्ने आवश्यक वाक्यांश पहिचान गरे। विकी यस ग्रहको सबैभन्दा भ्रमण गरिएको वेबसाइट हो, त्यसैले अन्वेषकहरू र विद्वानहरूले मुख्य वाक्यांशहरू पहिचान गरे जुन रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुबैका लागि आइडिस्याक्रेटिक थियो।
रिपब्लिकनले 'अध्यागमन' र 'आर्थिक समृद्धि' जस्ता मुख्य वाक्यांशहरू प्रयोग गर्ने थियो। अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याटले 'नागरिक अधिकार' र 'युद्धको राज्य' प्रयोग गरेको हुन सक्छ। प्रारम्भिक चरणमा, क्राउडसोर्स गरिएका लेखहरू र लिपिहरूले उदार विचारहरूको पक्ष लिए, त्यसैले ब्रिटानिकाको तुलनामा पूर्वाग्रहको रूपमा देखा पर्‍यो।
विकी पारस्परिक अन्तर्क्रियामा एक अभिन्न भूमिका खेल्दै आएको छ। विकिपेडियाले लेखकहरूलाई उनीहरूको भिन्नता र राजनीतिक विचारधाराको बारेमा छलफल गर्न एक समान स्तरको आधार दिइरहेको छ। हार्वर्ड स्कूल अफ बिज़नेसका अन्वेषकहरूले संकेत गरे कि विकीमा लेख समीक्षामा काम गरिरहेका २ 2. लाख भन्दा बढी सम्पादकहरूले उनीहरूको सिद्धान्तलाई सुल्झाइदिए र समयको साथ कम पक्षपाती भए।
एउटा प्रश्न उठाइएको छ कि नीलो प्रवृत्ति भएका सम्पादकहरू र स्वयम्सेवकहरूले निलो लेख र यसको विपरित भ्रमण गर्दछन्। जुलियट बार्बराले क्वार्ट्जलाई बताइन् कि सन्तुलित र सहयोगी दृष्टिकोणको प्रमाण भयो। खोजहरू आईपी ठेगानाहरू द्वारा साइटको भ्रमण गरेर समर्थन गरिएको थियो। विकिपेडिया एक उदासीन कारक भएको नतिजा द्वारा उत्प्रेरित गरिएको थिएन।
बार्बराले यो पनि संकेत गर्‍यो कि विकिपेडियाले सम्पादकहरू र सम्भावित प्रयोगकर्ताहरू बीच पूर्वाग्रह पत्ता लगाउन, र पूर्वाग्रहलाई पूर्ण रूपमा छुटकारामा काम गरिरहेको छ। भर्खरै, विकीले नियमहरू र दिशानिर्देशहरू समाहित गर्‍यो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कसरी संशोधित गर्ने र विशेष शीर्षकमा कमेन्ट गर्नका लागि नियमहरू प्रदान गर्दछ। ग्रिन्स्टीनका अनुसार लेखहरू सम्पादन र संशोधन गर्न भरपर्दो र अन्तर्निहित स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ। विकिपीडिया समुदायले स्वयंसेवकहरू र लेखकहरूलाई रायमा पार्ने विद्वान लेखहरूमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिदैन।
अनलाइन कुराकानीमा संलग्न विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका साथ योगदानकर्ताहरू र सम्पादकहरू यस्तो अवस्थाको परिदृश्य हो जुन विश्वभरि ग्राहकहरूलाई निःशुल्क ज्ञान प्रदान गर्न विकीको सफलताको लागि अग्रसर भएको छ। राजनीतिज्ञ र विकिपीडियाहरु जसले विकिपेडियालाई पक्षपाती अनलाइन आउटलेट हो भनेर सोच्दैछन्, हार्वर्ड स्कूल अफ बिजनेसका लेखकहरूले हालसालै गरेको अध्ययन अध्ययनले अन्यथा प्रमाणित गर्‍यो। केस स्टडीका अनुसार विकिपेडिया एक उत्कृष्ट अनलाइन आउटलेट हो जुन विवादास्पद विषयहरूमा बिभिन्न विचारधाराका ग्राहकहरुका लागि तटस्थ कारकको रूपमा काम गर्दछ।